Sababta Midowga Musharaxiinta ku doorteen in doorashada lagu s... | Universal Somali TV
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa dalbaday in doorashada lagu soo koobo Magaalo Madaxyada Dowlad Goboleedyada, ka dib qoraal ay u gudbiyeen Beesha Caalamka.
Dalabka Midowga Musharaxiinta ayaa khilaafsan heshiiskii Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ku wada gaareen Magaalada Muqdisho, kaasi oo dhigayay in doorashada lagu qabto min laba magaalo Dowlad Goboleed kasta.
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faah faahiyay sababta ay ku doorteen in doorashada lagu qabto min hal magaalo Dowlad Goboleed walba.
"Waxaan ku saleynay muranka ka soo noqday arrintii lagu heshiiyay, ee ay Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ku heshiiyeen ee laba deegaan doorasho lagu qabto, meelaha qaarkood qalalaaso ayaaba ka taagan, meelaha qaarkoodna qaabkii loogu qaban lahaa ayaa leesku fahmi la'yahay." Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Waxa kaloo uu yiri "Meelo kalena hadda aan ognahay xagga amniga inaysan saamaxeynin oo daruufaha amniga aysan diyaar u ahayna way jiraan iyo waqtiga oo ciriiri ah, maadaama hadda dhawr iyo labaatan maalmood ay ka harsan tahay muddo xileedkii Madaxweynaha Dowladda Federaalka."
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa intaa ku daray "Waxaas oo dhan markaan xeerinay oo daruufta amniga fiirinay, meelaha lagu muransan yahay, goobaha qaarkood aan eegnay, goobaha qaarkood oo amnigooda uusan saamaxeynin aan fiirinay, waqtiga ciriiriga ahna aan fiirinay ayaa waxaan soo jeedinay in lagu soo koobo Caasimadaha Dowlad Goboleedyada, si fursadda aan loo luminin, wadankana firaaq dastuuri oo 8-da February ka dib aan loo gelinin, oo arrintaasi horey looga socdo ayay taladeena ahayd."
Kan-xigaWasiirka Difaaca Somaliya oo la kulma...
Kan-horeDowladda oo maanta dib u furtay waddo...
56,984,346 unique visits